Maxaa haatan ka soconaaya Villa Soomaaliya oo uu shirka madasha ka socdo? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa haatan ka soconaaya Villa Soomaaliya oo uu shirka madasha ka socdo?
Waxaa maanta oo khamiis ah lagu wadaa in lasoo gaba-gabeeyo shirka madasha wadatashiga qaran oo maalintii shalay ka furmay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho
Shirkaan ayaa ah kii ugu dambeeyay ee lagu go’aaminayo xilliga ay dhaceeyso doorashadda Soomaaliya, waxaana markii lasoo gaba-gabeeyo la filayaa in laga soo saaro war-murtiyeed ku aadan qaabka ay u dhici lahayd doorashada dalka.
Madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ayaa maalintii shalay ilaa xalay kulamo gaar-gaar ah ku yeelanaayay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana ay ka doodayeen arrimo la xariira qaabka doorashada 2016 ka dhici doonta dalka iyo sidii ay usoo saari lahaayeen jadwalka doorashada oo dhameystiran.
Ilo xog-ogaal ah oo aynu helnay ayaa inoo sheegaya in madaxda shirkaasi ay weli isku hayaan in doorashada waqtigeeda ay dib uga dhigaan muddo labo bilood ilaa sedax bilood ah, si loo dhameystiro waxyaabaha harsan oo ay ka mid yihiin dhismaha Aqalka Sare iyo soo xulista baarlamaanka badalaya midka haatan jira.
Dooda shirka madasha wadatashiga oo ilaa iyo haatan socota ayaa la sheegi karin waxa dhabta ah ee ay isku raaceen, waxaana madaxda shirka laga sugayaa gaba-gabada shirkooda inay ka soo saaraan qodobo ay ku heshiiyeen oo kama dambeys ah.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga in maanta shirka laga soo saari doono qodobada ay madaxda shirka ku heshiiyeen, inkastoo laga yaabo in doodu dheeraato oo dib u dhacdo qodobada laga soo saari lahaa shirkaas, waxaana lakala ogaan doonaa xilliyada soo socda.